Manjaro 21.0 Ornara yakaburitswa, iine Linux 5.10 uye yakagadziridzwa desktops | Linux Vakapindwa muropa
Rinopfuura rinopfuura awa rapfuura, timu yevagadziri kuseri kweino inozivikanwa Arch Linux-based distro akakanda Manjaro 21.0. Iyo codename yavakasarudza ndiOrinara, uye yanga iri mukuvandudza kubva Zvita 31, panguva iyo yavakaburitsa yavo yekutanga yekutarisa vhezheni. Iyi vhezheni inosanganisira yakakosha maficha maficha, asi mazhinji acho ane hukama nemagariro enzvimbo irimo.
Kubva pakusunungurwa uku kunofanirwa kucherechedzwa kuti ndiyo yekutanga kushandisa Linux 5.10, yazvino LTS vhezheni yekernel. Uye zvakare, kubva kuManjaro Configuration Manager isu tinogona zvakare kuisa Linux 5.4 uye kusvika kune yazvino Kuburitswa Musarudzo weLinux 5.12, kune avo vanoda kuyedza izvo Linus Torvalds iri kugadzirira izvozvi.
Pfungwa dzeManjaro 21.0
Sezvatakambotaura, pamusoro peiyo musimboti, zvinyorwa zvakajairika zvakasvika nenzira yematafura akagadziridzwa:
Plasma 5.21, iyo inosimbisa iyo nyowani yekushandisa kuvhura (Kickoff), mukana wekuisa iyo nyowani System Monitor app, iyo firewall masetingi (Firewall) kana iyo yekutamba widget dura.
GNOME 3.38.3, iyo inogadzirisa mabugs mune iyo vhezheni iyo yaisanganisira Manjaro 20.2.1.
Xfce 4.16, iyo inoratidza kusimudzira kwakagamuchirwa nemaneja wehwindo, rutsigiro rwezvikamu zvishoma, kusimudzira mune mamaneja ekugadzirisa uye zvakawanda zvinogadziriswa muThunar.
Linux 5.10 nekutadza.
Calamares inosimudzira yekuvandudza.
Manjaro 21.0 Ornara izita rakapihwa kuchangoburwa sisitimu yekushandisa ISO, asi isu tinofanirwa kuyeuka kuti tiri kubata neiyo inoshandisa iyo yekuvandudza modhi inozivikanwa seRolling Release. Izvi zvinoreva kuti vashandisi varipo vakatogamuchira zvese zvavakagadziridza kuOrinara, uye takavagamuchira panguva yavakasunungurwa.
Zvekuisa nyowani, mifananidzo mitsva yave kuwanikwa kubva Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Manjaro 21.0 Ornara yakaburitswa, iine Linux 5.10 uye yakagadziridzwa desktops
Linux kernel iSCSI kushomeka inobvumira kukwidziridzwa kweropafadzo